'Hidhamtoonni siyaasaa' akka hiikaman murtaa'uun dhiibbaa alaatiin miti - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright MOFAE/FB
Hidhamtoota siyaasaafi namoota biroo akka hiikaman murtaa'uu, dhiibbaa qaama alaa kamiiyyu akka hin taane dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa beeksise.
Ibsa dhaabbileen miseensa ADWUI afran kaleessa kennaniin waliigaltee biyyaalessaa uumuufi dimokiraasii dagaagsuuf jecha namoonni siyaasaafi kan biroo akka hiikkaman Ministirri Mummee Haayilamaaraam Dassaalany dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Haala yeroorratti ibsa kan kennan Dubbi Himichi, Obbo Mallas Alam "dhaabbileefi mootummoonni biyya biroo murtee kana keessaa qooda hin qaban" jedhaniiru.
Kana malees "tarkaanfileen fudhataman kunneen walitti dhufeenya biyyoota waliin qabnu irratti dhiibbaa addaa kan qabani miti," jedhan.
Eegumsa mirga namoomaafi qabiinsa hidhamtootaa ilaalchisee dhaabbilee idil-addunyaa garaagaraan irra deddeebin qeeqamaa kan ture mootummaan Itoophiyaa ajjeechaafi dararaan mormitoota siyyaasaa irratti qaqabsiisaa jira jedhamu qorannoon akka qulqullaa'u miseensoonni paarlaamaa gamtaa Awuroopaafi miseensoonni seeneeti Ameerikaa tokko tokko gaafii dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama.
Haa ta'u malee "tarkaanfileen mootummaa Itoophiyaan fudhataman fedhii uummata biyyattiif malee fedhii qaama, garee yookiin biyya kammiiyyuu guutuuf kan fudhataman miti," jedhan.
Image copyright The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia
Kana malees, gaheen biyyattiin tasgabbii biyyaalee ollaa kan akka Sudaan Kibbaafi Somaaliyaa eegsisuu keessatti qabdu ol'aanaa ta'uusaa kan himan Obbo Mallas "gahee ishee kanaan walqabatees nageenyi biyyattii yeroo boora'u biyyoonni addunyaa biroo yaada'uun isaanii sirriidha," jedhaniiru.
Rakkoofi dararama lammiilee Itoophiyaa Liibiyaa keessa jiran ilaalchisee kan gaafataman Dubbi Himaan kun, gama imbaasii biyyattii Kaayiroo keessatti argamuun hordoffiin taasifamaa jiraachu isaafi lammiilee 30 ol ta'aniif ragaan imalaa qophaa'uusaa himaniiru.
"Namoonni kun gara Itoophiyaatti akka deebi'aniif Dhaabbatta Baqqatoota Addunyaa waliin ta'uun hojjechaa jirras," jedhan.
Gama biraatiin walitti dhufeenya dippilomaasiifi diinagdee biyyattiin biyyoota biroo waaliin qabdu akka cimsuufi mirga lammiilee ishee biyyoota biroo keessa jiran eegsisuuf biyyoota afur Aljeeriyaa, Morookoofi Ruwaandaa keessatti imbaasii akkasumas Turki- Istaanbuliitti ammoo waajjira qoonstilaa banuu dubbataniiru.
Biyyaalee lammiileen Itoophiyaa keessa jiraatan maratti imbaasii banuuf cimina diinagdee barbaada kan jedhan Obbo Mallas, gara fulduraatti Ameerikaa Kibbaa, Eeshiyaafi Awurooppaatti bakka bu'oota biyyattii babbal'isuuf ni hojjenna jedhaniiru.
Akkasumas, midiyaaleen tokko tokko ibsaafi dhimmoota ministeerichaan walqabatan karaa sirrii hin taaneen gabaasaa akka jiraniifi kunis akka fooyya'uuf gaafataniiru Obbo Mallas.